Hargeisa Times - La-kulankii Kowaad ee Dr Cabdiraxmaan Cirro Iyo Ambaqaadka Guusha WADDANI!
La-kulankii Kowaad ee Dr Cabdiraxmaan Cirro Iyo Ambaqaadka Guusha WADDANI!
Published On Saturday, November 04, 2017 By Burhaan A.khalaq. Under: Articles.
Markii kowaad waxa aanu hawada iska barannay sannadkii 2005ta, waxa uu ahaa murashax u tartamaya Golaha Wakiillada ee Gobolka Saaxil, aniguna waxa aan ahaa hal-abuur taageera xisbiga UCID. Ololihiisa waxa ku xardhanaa magaciisa, muuqaalkiisa iyo astaantii beretankiisa oo ‘wan’ ahayd, hannaanka agaasiman ee uu aashiisa u ambaqaaday waan la dhacsanaa. Qaar ka mid ah hormoodka dhallinyarada ah ee hareero taaganna waxa aanu lahayn daawo dheer. Haddii aan intaas dhankiisa ka arki jiray waxa uu dhegaystay tixo isla halgankaa UCID ee wakiillada ah. Sidaas ayay Cabdiraxmaan iyo Siciid is-aqooni uga dhexaysay iyaga oo aan ilbidhiqsi madal ku kulmin.
Maalin Jimce ah, dhawr cisho ka hor curashadii Ramadaan ee 2006da oo ah 15kii Sebtember ayaanu eedaanka maalin-badhka ka hor ku kulannay Ambassador Hotel ee magaalada Hargeysa. Waxa qabanqaabada shirkan lahaa nin eegga shaqaale dawladeed ah oo haddii aan sheego birta laga aslayo.
Cabbaar ayaanu weydiimo guud, heerkayga aqooneed iyo halka aan geddiga aqoon-raadinta kaga jiro, guushiisii xildhibaannimada, guddoonka wakiillada iyo hawlo guud u wada gorfannay. “Ramadaan ayaa bilanaysa. In aan ku soomo Finland oo ay qoysku joogaan ayaan rabaa. Inta aanan dhoofin illaa Isniinta ayaynu kulmi haddii Eebbe idmo. Soo dhawaw” ayuu yidhi. Taleefankiisiina wuu ii sheegay, kaygana waa uu qortay. Imakaba labadaas tirsi (number) waanu ka guurnay.
Meel ay salaaddu ka xidhmi weydayba, iyada oo aan ballanki hirgelin ayaa uu socdaalay. Qudhaydu dalka kuma negaane, dhawr bilood kaddib ayaan u duulay qaaradda Aasiya oo aan qaybo mid ah 2007da iyo 2008da ku qaatay. Waa markii kowaad ee aan indhahayga ku arko qof ka soo jeeda qowmiyadda Rohinga ee lagu xasuuqayo Burma oo u soo firxaday Baakistaan, iyada oo halkaasna laga siiyay dhalasho iyo degganaansho. Toban sannaba qalbigu wuu u huraa halaagga walaalladeen ku socda.
Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) waxa aanu kulannay dabayaaqadii 2009ka, aniga oo la socday dhallinyaro reer Hargeys ah oo markaas guddoonsiinayay shahaado-sharaf, waxa lagu bogaadiyay sidii uu gaashaanka ugu daruuray xisbiga UDUB ee Golaha Wakiillada qufulka ku xidhay. Ololihii UCID ee 2010kana waanu wada galnay, sidii aanu caanka ku ahaynna waxa aanu galnay kaalinta saddexaad. 2011kii ayaanu ku kala jabnay af-gembigii Guddoomiye Faysal Cali Waraabe. Anigu xertii u biyaysatay dawaynta dakharrada UCID gaadhay ayaan ahaa.
04tii illaa 05ttii Jeneweri 2012ka waxa aan ahaa xubin ka tirsan Golaha Dhexe ee UCID oo ka qayb-galay Shirweynihii mar saddexaadka lagu doortay Guddoomiyaha aan dhicin ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe. Iyada oo uu Faysal isla shirkaas ka shaaciyay in aanu madaxweyne uberetemi doonin mar saddexaad. Waxa UCID neecaw iyo naruuro u noqday heshiiskii Garabka UDUB ee ay Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo Cabdirashiid Xasan Mataan hormoodka u ahaayeen. Waxa aan Eebbe ku mahadiyaa in aan xabsi ku jiray maalinta ay kooxda Faysal laaleen wacadkaas iyo axdigaas culus. Weliba waa la ogaa halka aan hehiiskaas ka taagnaa..
Walaw aanu UCID iyo WADDANI kala ahayn (2011-2016), Cabdiraxmaan Cirro waa siyaasi soo-dhaweyn leh, idinka oo kala aragti ahna wax naxli iyo nashuushad ah kuma muujinayo. Gu’yaalkii u dambeeyay ee 2013ka illaa 2016ka waxa aanu wadaagnay hawlo kala geddisan, annaga oo kala xisbi ah, kuna midaysan argtida mucaaridka. 7dii Nofember 2016ka oo UCID laalay heshiiskii Garabka UDUB ee Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaan go’aansaday in aan ku biiro WADDANI… Macno malaha in boodh la sameeyo laguna sheego in Hebelku biirayo xisbi Hebel, mar haddii ay niyaddu qaraar gaadhana waxa ay xubnaha kale ee jidhku heegan u yihiin yihiin hirgelintiisa.
Is-barashadaas kowaad waxa laga joogaa 11 gu’ iyo dheeraad. Waa masuulka aanu saddexda murashax is-aqoonta ugu horreysa yeelanno. Kuma taageerayo WADDANI tolnimo, tuugo iyo tacaddi, waxa aan kula socdaa toosin, tashiil, tudhaale iyo tayaynta qaranka, sidaas ayaanu tartanka ku geli doonnaa doorashada qorshaysan 13ka Nov 2017ka haddii Eebbe idmo….